Maxaa ka jira in dowladda dhexe ay Ciidamo si qarsoodi ah uga qoratay Waqooyiga Gaalkacyo? - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Maxaa ka jira in dowladda dhexe ay Ciidamo si qarsoodi ah uga...
Maxaa ka jira in dowladda dhexe ay Ciidamo si qarsoodi ah uga qoratay Waqooyiga Gaalkacyo?
Gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland Axmed Muuse Nuur ayaa beeniyay in ay jiraan Ciidamo dowladda dhexe ee Soomaaliya ay si qarsoodi ah uga qoratay Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ee Puntland.
Waxaa uu sheegay in Wararkaasi yihiin been abuur ,islamarkaana aysan jirin hub iyo Ciidan lagu wareejiyay dowladda dhexe ee Soomaaliya.
“Waxaasi wax jira maaha ciidana lagama qoran gobolka Mudug, colaad Federaal iyo Federaal ku soo duulayna ma jiro” ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Mudug Axmed Muuse Nuur .
Previous articleSAWIRO: Safiiro gaaray Beledweyne
Next articleDHAGEYSO: Warka Duhur 9-11-2019
Madaxweyne Farmaajo oo ku faanay in Waxbarasho la’aan ah dowladdiisu siiso 65 Arday
Madaxweyne Farmaajo oo ku faanay in Waxbarasho la’aan ah dowladdiisu siiso...